भैलखः का तीन वटा गल सिः चिरा परे, भाँचिने अवस्थामा भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्का जात्रामा तानिने भैरवनाथ (भैलखः) रथका ३ वटा ‘गल सिः’ चिरा परेका छन्। भैलखःको मेरुदण्ड मानिने चार वटा गल सिःमध्ये तीनवटा चिरा परिसकेको र भाँचिने अवस्थामा रहेको गुठी संस्थानले जनाएको छ। रेणु त्वानाबासु
कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि त्यसबाट अहिले सबैभन्दा धेरै युवा र बालबालिका प्रभावित हुन थालेका छन्। देशका कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। गजेन्द्र बाेहरा
ह्वाङ्ग छन् नाकाहरू, कोरोनाको ‘दोस्रो छाल’ बढ्दै
तर, नेपालका सिमा नाकाहरूमा अहिलेसम्म ह्वाङ्गै छन्। नाममात्रैका ‘सहायता कक्ष’हरूको निगरानी प्रभावकारी छैनन्। दिनहुँ हज्जारौं मानिस भारतबाट फर्किन्छन् र नेपालबाट पनि गइरहेका छन्। तर, पनि सिमा नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छैन। आयोमेल संवाददाता
अनि यसरी बन्यो ‘आमाको अचार’ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड [भिडियो वार्ता]
मेरो बाबाको मामाकी छोरी घरमा आउनुभएका बेला हामी पनि एउटा किन्दिन्छौं भनेर ५ सय रुपैयाँ हातमा राखेर जानुभयो। त्यो नै मेरो पहिलो कमाइ थियो। सोही पैसा मैले मेरी सासुआमालाई हजुरको बुहारीको कमाइ लिनुस् भनेर हातमा लगेर राखिदिएँ र सासुआमाले मलाई टाउकोमा हात राखी तिम्रो सँधै फलोस फुलोस भनेर आशिर्वाद दिनुभयो। आज उहाँकै आशिर्वादले म यस स्थानमा छु। आफूभन्दा ठूला मानिसको आशिर्वाद लिइ अघि बढियो भने पक्कै पनि सफल व्यक्ति बन्न सकिँदोरहेछ भन्ने कुरा मैलै आफ्नै जीवनमा भोगेँ। आयोमेल संवाददाता
सावधान! नयाँ भेरियन्टको कोभिडमा संक्रमणशीलता मात्र हैन मृत्युदर पनि बढी छ
यस पटकको उभारमा कोभिड लागेर कोही सिकिस्त भएमा अघिल्लो उभारमाभन्दा उपचार गर्न बढी कठिन हुने, मृत्युदर बढी देखिने सम्भावना ठूलो छ। डा. अनुप सुवेदी
सन्तानप्रति आमाको समर्पण र स्नेह कति हुन्छ त्यसको उदाहरण बनेकी छिन् जनकपुरकी ७० वर्षीया राजकुमारी मिश्र। बिहानै पूजापाठ गरेर छोरा शम्भुको स्यहार सुसारमा लाग्छिन् उनी। पिठ्युको हड्डी कमजोर भएर आफैं थला परिसकेकी राजकुमारीलाई छोराका ज्यान जोगाउने धोको मरेको छैन। आयोमेल संवाददाता
हरेक पटक उनी रुख काट्न हतार त छैन भन्छन्। तर, पटकपटक रुख काट्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागिरहेका हुन्छन्। सरकारले विमानस्थल बनाउनका लागि रुख कटान तथा सट्टा भर्ना वृक्षारोपणका लागि भनेर २१ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। तर पहिलो चरणका लागि रुखहरु काट्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ५० करोड मात्रै दिएको छ। गजेन्द्र बाेहरा
कस्तो अवस्थामा हुन्छ मुद्दाको पुनरावलोकन?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वोच्चेको नेकपा खारेजीको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा छन्। अदालतको निर्णय विपक्षीले मागेका विषयभन्दा बढी फैसला गरेको भन्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका हुन्। अनिता श्रेष्ठ
अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। देशका ४६१ ठाउँमा सल्किरहेको डढेलोबाट पुत्पुत्ताइरहेको धुँवा कहाँबाट कति काठमाडौंमा छिरेको छ भन्ने बारेमा अझैसम्म आधिकारिक अनुसन्धान भएको छैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा पश्चिम दिशाबाट बढी हावा छिरेको छ। गजेन्द्र बाेहरा
खुवालुङ, त्यही ढुङ्गा हो जसले तमोर, दुधकोशी र अरुण नदीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराएर सप्तकोशीमा परिणत गराउँछ।उक्त ढुङ्गा तीन नदीको संगमस्थल मात्र नभई नेपालमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका किराँतहरुको धार्मिक स्थल पनि हो। अनिता श्रेष्ठ
लुगा सिउँदै बुनिएका डाक्टर बन्ने सपना
‘जुम्ला, हुम्लाबाट तीन दिन गाडी चढेर बिरामीहरू आएका हुन्छन्। उपचारकै लागि भनेर तीन–चार महिनादेखि पैसा जम्मा गरेर आएका हुन्छन्। बिरामीको त्यस्तो अवस्थाले मलाई छोइरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्। यज्ञराज जाेशी
झापास्थित विवादित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गराएको छ। दीपक दाहाल
सत्ताको केन्द्रमा जसपा : ओलीसँग गर्ला सहकार्य?
बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनसक्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, बैठकले यसबारे केही निर्णय गरेन। नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेसका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले हालसम्म सकारात्मक संकेत नदिएपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई सकस भएको छ। धैर्यकान्त दत्त
कहिले पाउने महिलाले समान ज्याला?
'मैले सात वर्षदेखि आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा अङ्ग्रेजी विषय पढाउँदै आएकी छु, तर मेरो तलब सोही तहमा पढाउने शिक्षक (सर) को भन्दा आधा कम छ।', म्याग्दीको एक निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षिकाले भनिन्, 'समानता त नारामा मात्रै हो, व्यवहारमा भने अझैसम्म देखिएको छैन।' आयोमेल संवाददाता